Wararkii ugu Danbeeyay ee Doorashada Kenya. – SBC
Wararkii ugu Danbeeyay ee Doorashada Kenya.
Posted by SBC Editor on August 11, 2017 Comments
Guddiga doorashada Kenya ayaa Cabduba Dida oo ah mid ka mid ah musharrixiinta madaxtinnimada ayaa ka dalbaday guddiga inuu tartanka ka saaro labada musharrax ee ugu horreysa.
Wuxuu sheegay in kan saddexaad lagu dhawaaqo, maadama buu yiri ay raila iyo Kenyatta labaduba ay codadka xadayaan.
Wafula Chebukati, Guddoomiyaha guddiga doorashada ayaa sheegay inay wali sugayaan natiijooyinka qaar ka hor inta aan lagu dhawaaqin natiijada.
Mr Dida, oo caan ku ah hadallada maadeysiga ah ayaa soo jeediyay in musharrixiinta lagu saameeya baaritaanno caafimaad oo dhinaca muqaadaraadka ah ka hor inta aan loo oggolaan inay tartamaan.
Khamiistii shalayna Madaxa Guddiga Doorashada Chebukati waxa uu sheegay inuu jiray isku day lagu doonayay in loogu dhaco komputeradooda, markii ay codeyntu soo dhamaatay ka dib, hasa yeeshee lagu guul
Waxaa dalkaasi ka dhacay rabshado goos goos ah, gaar ahaan meelo ay ka mid yihiin Kisumu, Mathare iyo abasiibada Kibera ee magaalada Nairobi, halkaas oo Shaagagga baabuurta ay gubanayeen wadooyinka tan iyo